Xukuumadda oo ka jawaabtay hadal ka soo yeedhay Shirguddoonka Wakiilada | Somaliland.Org
Xukuumadda oo ka jawaabtay hadal ka soo yeedhay Shirguddoonka Wakiilada
August 30, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay dhawaaq Shirguddoonka Golaha Wakiiladu ku sheegay in Xaruntii Golaha Ciidan qabsaday.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Cabdilaahi Ismaaciil Cali (Cirro) oo xalay Shir-jaraa’id ku qabtay Hargeysa, ayaa wuxuu yidhi, “Waxaan idiinku yeedhay caawa waxaan u malaynayaa inaad maqlayseen Guddoomiyaha Golaha Wakiilada War uu sheegay oo ahaa Ciidanka Booliska ayaa nagu soo weeraray xaruntii Golaha Wakiilada. Marka ugu horreysa Ciidanka Booliska ee Somaliland ama Wasaarada Arrimaha Guduhu iyagaa u xilsaaran sugidda Nabad gelyada, haddii ay masuuliyiin Qaranka tahay iyo haddii ay ilaalinta hantida ummadda tahayba, Madaxda oo dhan-na waxa la socdo Ciidan ilaaliya nabad-gelyadooda. Ciidankii hore ee ilaalinayay (Xarunta baarlamaanka) iyo kuwan cusub ee aanu maanta u dirnay wax faraqa oo u dhaxeeyaa ma jirin. Waa isla ciidankii uun.”
Wasiirka Arrimaha gudaha oo ka hadlayay sababta ay Xukuumaddu Ciidanka u geysay Xarunta Baarlamaanka, ayaa wuxuu yidhi, “Golaha Wakiiladu waa niman qadarin, sharaf iyo maamuus ummadda ka mudan, waayo dadweynaha ayaa soo doortay. Waxay leeyihiin maamuus gooniya iyo ixtiraam gooniya. Ciidankii Booliska ee aanu maanta ku xoojinay xaruntooda waxay ahayd markii aanu ogaanay in xalay Golaha Wakiiladu ay kala shirayeen oo gaar ahaan Guddoomiyuhu kala shir-siinayay oo uu qolona Huteelka Ambassador kula shiray qolana Maansoor kula shiray, oo uu awooddiisa isku keeni kari waayay inuu mideeyo ayaanu ogaanay. Isla markaana la abaabulay Rag dhalinyaro ah oo Golaha hortiisa Rabshad ka sameeya. Taas oo aanu u hayno markhaati cad. Warkii aanu haynay waxa caddeeyay oo dhex maray oo raacay shirgudoonka dhalinyaradii mudaharaadka samaynaysay waliba iyagoo ay la socdaan ciidanka boolisku ay shiideen, taasina waxaan u malaynayaa saxaafadu way ogayd arrintaasi ay shir-gudoonku sameeyeen.” Waxaanu Wasiirku intaa raaciyay oo uu yidhi, “Waxay ahayd arrimihii aanu markii horeba ka sii afeef dhiganaynay ee aanu marka horeba ciidanka u geynay. Marnaba Anigu uma aanaan geyn ciidanka ilaalada ah inay dhibaateeyaan Xildhibaanada sharafta mudan,”
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo ka hadlayay lix Mudane oo muxaafidka ah ee Shir-gudoonku ku anshax mariyay inay muddo sadex cisho ah ka baxaan fadhiyada golahaasi, waxa uu yidhi “Qoladan (Xildhibaanadan) uu Guddoomiyuhu lahaa waxaanu saarnay ganaax, Anagu awoodna kuma aanaan gelin, kamana aanu joojin karayn. Waxay noola mid yihiin uun sida Xildhibaanada kale ee ixtiraamka mudan ee golaha. Si kastaba ha ahaatee, 6-da Xildhibaan ee uu leeyahay anshax-xumo ayay sameeyeen, lixdu kaligood iskamay botorine’e dad bay iska horyimaadeen haddii ay af tahay iyo haddii ay gacanba tahay. Markaa waxaan u arkaa inay cadaalad darro tahay iyo dhibaatadan maanta golaha dhexdiisa ka taagan masuul uu ka yahay. Waayo raggan 82-ka ah ninkii isku keeni lahaa isaga weeye ee Guddoomiyahana loo doortay ee kitaab ilaahay maray inuu eexdo may ahayn.” Wasiirka oo hadalkiisa sii wataa wuxuu intaa raaciyay, “Arrintii uu yidhi (Guddoomiyaha Wakiiladu)Taliyaha Ciidanka Booliska ayaa igu yidhi meel iga sareysa ayaa amar laga soo siiyay ciidanka golaha la keenay, horta Taliyaha ciidanka boolisku Wasaarada Arrimaha gudaha ka sokow isagaa nabadgelyada xukuma, taasina ma aha afkiisii waa nin janan ah oo waayo arag ah, nin odhanaya amar baa Wasiir ama cid kale isoo siisay ma aha. Nabad gelyada ayuu waajibkiisa ka gudanayaa. Ciidanka Boolisku cidna waxba umay diranayn,”
Intaa ka dib, su’aalo halkaa lagu waydiiyay iyo jawaabihii uu ka bixiyay qaar ka mid ahina waxay u dhaceen sidan;
S: Wax maanta ciidankii aad u dirteen golahu xaliyeen oo ay qabteen ma jiraan, mise intay saaka tageen ayay iska soo noqdeen duhurkii?
J: Maya, ma ay soo noqone’e dhalinyaradii mudaharaad ayay isku dayeen, shirgudoonkuna waabay dhex tageen. Taasina wixii aanu markii hore haynay ayay sii caddaysay. Iyo wixii maalintii hore dhacay ee Xildhibaanadu ay dhexdooda isku khilaafeen, ee ay xalay iyo daraad u kala shirayeen ee ay isku haysteen dhexdooda tiina way caddaatay.